युवती बाथरुम भित्र नुहाउँदै थिइन्? भेण्टिलेटरको प्वालबाट यी पुरुषले भिडियो बनाएपछि… – List Khabar
Home / रोचक / युवती बाथरुम भित्र नुहाउँदै थिइन्? भेण्टिलेटरको प्वालबाट यी पुरुषले भिडियो बनाएपछि…
admin August 16, 2021 रोचक Leaveacomment 101 Views
हाम्रो समाजमा नुहाउने र लुगा फेर्ने काम गर्दा कसैले नदेखुन् भन्ने मान्यता हुन्छ । तर कसैले नुहाई रहेको भिडियो नुहाउनेले थाहै नपाई बनाए के होला? पक्कै उ सजायको भागिदार होला ।
यस्तै एक घटना भारतमा भएको छ । उत्तर प्रदेशको ग्रेटर नोएडा पश्चिम क्षेत्रको एउटा समाजबाट एउटा अत्यन्तै स्त ब्ध पार्ने घटना सामने आएको छ । यहाँ बस्ने एउटी महिलाले आरोप लगाएकी छिन् कि उनी नुहाउँदै गर्दा छिमेकी छिमेकीले लुकेर उसको भिडियो बनाइदिए । महिलाले पुलिसमा उजुरी गरिसकेपछि आरोपीलाई पक्रियो । उक्त महिलाले आरोप लगाइन् कि छिमेकी गु प्त रूपमा स्काईलाइटबाट भिडियोहरू बनाउँदै थियो ।
महिलाले पुलिसलाई बताइन् कि सोमबार दिउँसो उनी आफ्नो फ्ल्याटमा नुहाइरहेकी थिईन्, उनले स्काईलाइटमा केही चाल देखिन्, पछि उनी हतारिएर बाहिरआईन् र देखिन् कि स्काईलाइटको एक मोबाइल थियो र त्यहाँ उनका छिमेकी हर्षदेव त्यहाँ थिए । यो पछि उक्त महिलाले तुरुन्त पुलिसलाई उजुरी गरिन् । प्रहरीले मु द्दा दर्ता गरी आरोपी हर्षदेव शर्मालाई अदालतमा पेश गरेको छ जहाँ अदालतले आरोपितलाई जेल पठाएको छ । उक्त मानिसलाई पुलिसले उनको घरबाट गिरफ्तार गरेको थियो ।
Previous हत्केलामा यस्तो चिन्ह हुने व्यक्ति हुन्छन् कम समयमै धनी, तपाईको हातमा पनि छ की ?
Next सुनले भरिएको उल्का पृथ्वीको नजिक : पृथ्वी भरिकै अमुल्य चीज कहाँ खस्छ ?